Jamaal Cali Husein oo Ka Hadlay Khilaafka Ucid Waraysi Xasaasi ah oo dhinacyo badan tabanaya | Salaan Media
Jamaal Cali Husein oo Ka Hadlay Khilaafka Ucid Waraysi Xasaasi ah oo dhinacyo badan tabanaya
Jamaal Cali Xuseen oo Dhaliilo Culus Tunka u Saaray Golaha Wakiillada Somaliland
“Waxayn ognahay in Shirguddoonka Wakiilladu yihiin kuwii mudaharaadka abaabuli jiray markii ay Rayaale is-qabsadaan, imminkana waxaynnu aragnaa Gole Wakiillo oo aad mooddo inuu xukuumadda ka tirsan yahay”
“Annagu sida KULMIYE oo kale ma nihin oo iskuma haysanno jagooyin iyo xilal, la iskumana haysto yaa guddoomiye noqonaya iyo yaa murrashax noqonaya, taasna xisbiga UCID qallaylka ayuu ku kala qaybsaday”
“Ninka xildhibaanka ah waxa uu u xaadiraa $1200 doollar, askariguna 500,000 Sl.Sh (shan boqol oo kun) oo shillinka Somaliland ah, taasina…”
“Waxaad mooddaa in xukuumaddu kor-u-kaca dhaqaalaha u fahamtay miisaaniyadda oo la kordhiyo oo kolba tiro lagu daro, cashuur dheeraad ahna dadka dusha laga saaro”
Waraysi Khaas ah – Murrashaxa jagada Madaxweynaha ee xisbiga UCID
Hargeysa (UCID-Media Group)– Murrashaxa jagada Madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID Md. Jamaal Cali Xuseen, ayaa dhaliilo culus oo kala duwan tunka u saaray Golaha Wakiillada Somaliland, kuwaasoo uu ku eedeeyey inay ku dhex milmeen xukuumadda talada haysa oo ay ahayd inay la xisaabtamaan, isagoo sidoo kale ka hadlay khilaafka la sheegay inuu ka dhex qarxay xisbigiisa.
Md. Jamaal Cali Xuseen oo khadka telefoonka kula soo xidhiidhay Jamhuuriya shalay, waxa uu ku eedeeyey mudanayaasha Golaha Wakiillada inay u muuqdaan hay’ad ka mid ah golaha wasiirrada ee xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo, isagoo docda kalena go’aanka shirkadda Genel Energy ee shidaalka baadhaysay dalka kaga baxday ku sifeeyey mid dhaawac ku ah Somaliland, waxaannu inta badan masuuliyadda arrintaas u xambaariyey Golaha Wakiillada.
“Golaha Wakiilladu waa hay’adda ugu mudan ee dastuuriyan qaban karta xukuumadda, waxayna leeyihiin awoodo dastuuri ah oo ay xukuumadda kula xisaabtami karaan, kuna daba geli karaan, markaa waxaan odhan karaa dalku waxa uu ka dhintay dhinicii Golaha Wakiillada, awoodoodii oo dhanna may muujin, waxaanad runtii mooddaa hay’ad kale oo xukuumadda amma Golaha Wasiirrada ka tirsan, sababtoo ah wax kastoo dawladdu doonayso si dhib yar bay u marsataa Golaha Wakiillada, waxaanan xasuustaa saddexdii bilood ee la soo dhaafay mooshin amma xeer qudha oo xukuumaddu wataday wakiilladu may horjoogsan, waxayna noqdeen golihii duuduub-ku-ansixinta.
Waxa kale oo aan xasuustaa in mudanayaasha wakiilladu dood adag ka yeelan jireen marka dawladihii hore ee Rayaale iyo marxuum Cigaal ay golaha u gudbiyaan miisaaniyad-sannadeedka, laakiin miisaaniyaddii u dambaysay ee lagu shaqeeyo sannadkan 2013 qadar daqiiqado ah ayaa lagu ansixiyey, weliba waxay is-weydiiyeen ma duuduub ayeynnu ku ansixinnaa, mise dood baynu ka yeelanaa? Markii dambena duuduub ayaa lagu ansixiyey,” ayuu yidhi Md. Jamaal Cali Xuseen.
Sidoo kale, waxa uu sheegay in Golaha Wakiilladu noqdeen qaar gabay oo ku fashilmay shaqadii ummaddu u dooratay, isagoo arrimahaas iftiiminayeyna waxa uu yidhi; “Golihii Wakiillada Somaliland waxay noqdeen waraabo-u-taag, ummadduna way ku fashilantay, waayo waxa la doonayaa inay xaaladaha dalka ka jira la socdaan oo mar walba la xisaabtamaan xukuumadda iyo golaha wasiirrada, welina ma hayo mudanayaasha wakiillada oo diiday wax xukuumaddu u soo gudbisay amma arrin taabanaysa ummadda Somaliland.
Tusaale ahaan;, go’aanka shirkadda Genel Energy ee shidaalka baadhaysay kaga baxday Somaliland waa mid dhaawac weyn ku ah dalka. Mar qudha ayey yidhaahdeen dalka nabadgelyo xumo ayaannu uga baxnay, arrintaasina waa wax dhaawac weyn oo dhabar-jab ah ku noqon kara qaranka Somaliland, taasna Golaha Wakiilladu qayb ayey ku leeyihiin, sababtoo ah waxay ahayd in mudanayaasha wakiilladu xukuumadda ka dalbadaan inay horkeento heshiiskii shirkaddaas lala galay markii ay dalka timi oo laga doodo, kadibna hadday dan ugu jirto ummadda la ansixiyo, haddii kalena la joojiyo. Laakiin hadda waxaad mooddaa in xukuumadda iyo shirkadda Genel Energy ay markoodii hore suuq madow ku heshiiyeen, imminkana suuqii madoobaa innagu qarxay, lamana garanayo oo Golaha Wakiillada ee bulshada matalay ma garanayaan wax shirkaddaasi dalka ka baadhaysay iyo wax lagula heshiiyeyba. Arrintaasi waa mid dhaawac ku ah dhaqaalihii Somaliland iyo hiigsigii ummadda ee ahaa in shidaal loo soo saaro oo hadhow cid walba waxay odhan doontaa tagi maynno Somaliland ee shirkaddii Genel Energy-ba waa tii sababo dhinaca ammaanka ah uga baxday.”
Waxa kaloo Mr. Jamaal uu xusay in xeerar badan oo dalka faa’iido u leh qabyo yihiin, ilaa haddana aanay Golaha Wakiilladu waxba ka qaban, “Waxyaabaha qabyada ah ee dalka faa’iidada u leh waxa ka mid ah xeerkii maalgashiga (Investment Low) iyo xeerkii shidaalka (Petrolium Low), xeerkii Sirdoonkana markiiba Golaha Wakiilladu duuduub ayey ku ansixiyeen, arrintaasina waa waxyaabayaha muujinaya fadhiidnimada wakiillada oo ka mid noqday golihii xukuumadda. Waxyaabaha kale ee loo baahan yahay inay wax ka qabtaan waxa ka mid ah cashuurahan markasta ummadda lagu kordhinayo, cashuurahaasna kharash badan ayaa soo galaya oo culays ku ah dadka shacabka ah. Sidaa darteed, waxaan ummadda Somaliland leeyahay waa dinay u fiirsadaan Golaha Wakiillada oo ah hay’addii dheelli-tirka u samaynaysay xukuumada.
Tusaale haddaan soo qaato, shirkaddii TOTAL ee la eryey, shidaalka ay keeni jirtay calaa foosto waxa u saarnaan jiray $11 doollar, taasoo loo saaray maalgashigii ay dalka ku sameeyeen si ay ula soo noqoto wixii ka galay. Imminka shirkaddii TOTAL meesha way ka baxday, $11 doollar-na weli way socdaan, cid qaadatana la garan maayo.
Noloshii way ku sii adkaanaysaa dadka. Cashuurihii baa dusha laga saaray, cashuurahaasina waa culays ku biiraya ummaddii, iyadoo aan dadkiina wax adeeg ah dawladdu ugu qabanayn oo waa taas la arkay dhibaatooyinka shaqo la’aanta iyo biyo la’aantu ka mid yihiin. Waddo-xumo ayaa dalkii ka jirta oo maalin walba waxaynnu aragnaa waddo la dhagax-dhigayo, laakiin mid la furayo oo la dhammeeyey lama arag, waxaanan soo jeedin lahaa in aan waddo dambe la dhagax-dhigin ilaa la dhammaynayo kuwii hore oo ummadda la tusayo.”
“Waxaad mooddaa in xukuumaddu kor-u-kaca dhaqaalaha u fahamtay miisaaniyadda oo la kordhiyo oo kolba tiro lagu daro, si taas loo helana kolba la kordhiyo cashuur dheeraad ah oo dadkii culays dusha laga saaro, markaa waxaan leeyahay waa in Golaha Wakiilladu shaqadiisa qabsado oo ay noqdaan hay’ad madaxbannaan oo si dhab ah xukuumadda ula xisaabtama. Waxaan ognahay culayskii Golaha Wakiilladu saari jireen dawladdii Rayaale, waxaynby ognahay in Shirguddoonka Wakiilladu yihiin kuwii mudaharaadada abaabuli jiray markay dawladdii Rayaale is-qabsadaan, laakiin intii xukuumaddani talada dalka la wareegtay ma aragno wax culays ah oo Golaha Wakiilladu saaray, laakiin waxaynu aragnaa Gole Wakiillo oo aad mooddo inay xukuumadda ka tirsan yihiin,” ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen, isagoo Golaha Wakiillada kula taliyey inay gartaan wixii loo soo doortay, isla markaana laga shaqaysiiyo guddi-hoosaadyada.
Waxa uu intaa ku daray in mudanayaasha wakiilladu ka shaqeeyaan dantooda oo qudha, balse aanay wax xil ah iska saarin danta bulshada iyo shacabka soo doortay ee Somaliland, isagoo isbarbardhig ku sameeyey mushaharka mudanuhu qaato bishii iyo mushaharka la siiyo askariga ciidammada qaranka ka tirsan.
“Golaha Wakiilladu maaha inay kelidood mushaharka isku kordhiyaan, marka ay shaqada ka tagaana sannad mushaharkii sii qaataan, waana inay ka fikiraan danta ummadda danyarta ah ee dooratay. Ninka askariga ah markuu dhinto wax xuquuq ah oo uu leeyahay ma jirto, haddii uu shaqada ka tagana wax la siinayaa ma jirto. Mudanaha Golaha Wakiilladu waxa uu bishii mushahar u qaataa inta ay 15 askari oo ciidammada ka tirsan qaataan bishii. Tusaale ahaan; ninka xildhibaanka ah waxa uu u xaadiraa $1200 doollar, askariguna 500,000 Sl.Sh. (shan boqol oo kun) oo shillinka Somaliland ah, taasina waxay muujinaysaa in 15 askari mushaharkoodu u dhigto inta uu hal xildhibaan qaato.”
Geesta kale, Mr. Jamaal waxa uu markii ugu horreysay si toos ah uga hadlay warar warbaahinta maxalliga ah baahinayeen maalmahan oo ku soo saabsan khilaaf la sheegay inuu ka dhex qarxay hoggaanka xisbiga UCID, gaar ahaan isaga iyo Eng. Faysal Cali-waraabe.
Murrashaxa oo Jamhuuriya weydiiyey waxa arrimahaas ka jira, ayaa ku dooday in aannu jirin wax khilaaf iyo muran ah oo ka dhex taagan xisbiga UCID, balse waxa uu sheegay in farogelin lagu hayo xisbigooda, “Horta annagu sida KULMIYE oo kale ma nihin oo iskuma haysanno jagooyin iyo xilal, la iskumana haysto yaa guddoomiye noqonaya iyo yaa murrashax noqonaya, taasna xisbiga UCID qallaylka ayuu ku kala qaybsaday oo intii aan doorashaba la gelin ayaannu sii dhammaysannay, golahayagii dhexena ansixiyey, hay’adihii ku shaqada lahaana loo wada gudbiyey.
Wax khilaaf ah xisbiga UCID kama dhex taagna, laakiin fikradihii xisbiga sidii loo gudbin lahaa ayaa laga yaabaa in fikrado kala jaad ah meesha yimaaddaan, taasina waxay muujinaysaa in xisbigu yahay meel arrin ka socdo oo talada la rog-rogo, waxaanad mooddaa in nalaga dhex faa’iidaysanayo oo dad kaloo dano kale leh naga faa’iidaysanayaan. Mar walba ay noo soo farogelinayaan sidii xisbigayaga la isugu dhufan lahaa, taasna waannu ka feejignaan doonnaa, waxaanan jecelnahay in toddobaadka soo socda annaga oo isku duuban aannu waxayagii iyo shaqadii xisbiga dadka u soo bandhigno si meesha looga saaro in wax khilaaf ah ka dhex jiro UCID,” ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.